योग थेरापी : नसर्ने रोगको व्यवस्थापन गर्ने उपाय
२०७७ असार २३ मंगलबार १०:५८:५४ प्रकाशित
काठमाडौं– अस्वस्थकर जीवनशैली, निष्क्रिय दैनिकी र प्रदूषित वातावरणले विभिन्न रोग निम्त्याइरहेको छ। मानिसहरु दिनदिनै रोगी बन्दै गएका छन्।
त्यसो भए स्वस्थ कसरी रहने त? सरल र प्राकृतिक विधि अपनाउने हो भने योगलाई सबैभन्दा उपयुक्त उपाय मान्न सकिन्छ। योगको माध्यमबाट मानिस तन र मनबाट स्वस्थ रहन सक्छन्।
मानिसहरु निरोगी बन्न योगतर्फ आकर्षित भइरहेका छन्। योग स्वस्थ रहने उपाय मात्र होइन, विभिन्न रोगको उपचार पनि हो।
योगका फाइदाबारे अधिकांश मानिस जानकार त छन्, तर व्यवहारमा लागू भने गर्दैनन्। योगलाई जीवनको महत्वपूर्ण हिस्सा बनाउने हो भने हामी निरोगी रहन सक्छौं। हिमालयन योग तथा प्राकृतिक अस्पतालका फाउन्डर चेयरम्यान डा आनन्द गैह्रेको विगत १३ वर्षको अनुभवले पनि यही भन्छ।
उनी योगा कन्सल्टेन्ट पनि हुन्। नेपाल योग थेरापी एसोसिएसनको अध्यक्ष समेत रहेका गैह्रे त्रिभुवन विश्व विद्यालयको संस्कृत विभाग अन्तर्गत योगका विषयमा अध्यापन गर्छन्।
उनको योगको शैक्षिक यात्रा सन् २०१३ देखि सुरु भएको हो। योगको महत्व र यसले पार्ने प्रभावकै कारण उनी योगको अध्ययनको यात्रामा अघि बढे। भन्छन्, योग भनेको जिवात्मा र परमात्मालाई जोड्ने साधना हो। योगको माध्यमबाट मन र मस्तिष्कलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ।
मस्तिष्क नियन्त्रण बाहिर जाँदा नै तनाव उत्पन्न हुन्छ। तनावले नसर्ने रोगहरु निम्त्याउने डा गैह्रे बताउँछन्।
उनले लागू पदार्थ दुर्व्यसनीमा योगले केकस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने विषयमा सन् २०१८ मा पिएचडी गरेका छन्।
योगको क्षेत्रमा योग थेरापीलाई वरदान मानिन्छ किनभने योग थेरापीको माध्यमबाट रोगलाई जित्न सकिन्छ।
नेपालमा अहिले योग थेरापीको सेवा उपलब्ध छ। हिमालयन योग तथा प्राकृतिक अस्पतालमा योग थेरापीको माध्यमबाट विभिन्न रोगको उपचार हुँदै आएको छ।
योगको माध्यमबाट विभिन्न नसर्ने रोगलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने नै योग थेरापी हो। उदाहरणका लागि कुनै व्यक्ति मधुमेहका बिरामी छन् भने ती व्यक्तिलाई कस्तो किसिमको योगका आसनहरु सिकाउने, कसरी व्यवस्थापन गर्ने, कस्ता ध्यानहरु सिकाउने भन्ने विषय समावेश हुन्छ।
कुनै विशेष रोगका लागि विशेष किसिमले योगको माध्यमबाट थेरापी दिनुलाई योग थेरापी भनिने डा गैह्रेले बताए।
मधुमेह, उच्च रक्तचाप, गलगाड, बाथ, पेटसम्बन्धी समस्या, थाइरोइडसम्बन्धी समस्यालाई योग थेरापीको माध्यमबाट व्यवस्थापन गर्न सकिने उनले जानकारी दिए।
योगबारे जानकार भए पनि नेपालीले व्यवहारमा लागू गर्न नसकेको उनी बताउँछन्। यो थेरापीमा प्राकृतिक विधिबाट रोगलाई व्यवस्थापन गर्ने उपायहरु अपनाइन्छ।
सरकारले कक्षा ९, १०, ११ र १२ को पाठ्यक्रममा योगबारे विषय समावेश गर्ने तयारी गरेको उनले बताए। सरकारले वैकल्पिक चिकित्सा अन्तर्गत योगलाई पनि राखेको छ। सरकारले योगको क्षेत्रमा केही प्रयास गरे पनि त्यो पर्याप्त नभएको डा गैह्रे बताउँछन्। ‘सरकारले योगमा धेरै गर्न बाँकी छ। केही काम भएका छन् तर त्यो पर्याप्त छैन,’ उनी भन्छन्।
योग गर्दा तालिमप्राप्त प्रशिक्षकसँग सिकेर मात्र गर्न उनको सुझाव छ। सबैलाई एकै किसिमको योगका आसन हुन नसक्ने उनी बताउँछन्।
उनले भने, ‘सबैको शरीर एउटै छैन। त्यसैले सबैलाई एउटै किमिसको योगासनले नहुन सक्छ। त्यसैले योग सुरु गर्दा आफूखुसीभन्दा पनि प्रशिक्षकसँग सिकेर मात्र गर्नुपर्छ।’
योगको माध्यमबाट रोगी व्यक्तिले आफूलाई निरोगी र स्वस्थ तुल्याउन सक्छन्। योग सबैका लागि आवश्यक र महत्वपूर्ण छ। उनी भन्छन्, ‘हामी सबै योग गरौं। योगले नै रोग र तनावलाई व्यवस्थापन गर्न सिकाउँछ।’
१. काठमाडौंमा कसरी फैलियो कोरोना? प्रहरी मुख्यालयदेखि अख्तियारसम्म संक्रमण
१०. काठमाडौं उपत्यकामा ४४ जना नयाँ संक्रमित थपिए, कुल संक्रमितको संख्या १,१८०